एक परिवर्तनीय पालना छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको बच्चासँग बढ्छ सजाउनुहोस्
कन्भर्टेबल क्रिब छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको बच्चासँग बढ्छ
मारिया vazquez | | सजाउनुहोस्
पहिलो पटक अभिभावक बन्न ठूलो हुन सक्छ। बच्चा आउनु अघि धेरैले धेरै चीजहरूको हेरचाह गर्नु पर्छ। पहिलो र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण यो हो आफ्नो कोठा प्रस्तुत गर्नुहोस् र बच्चालाई चाहिने सबै चीजहरू खरीद गर्नुहोस् (जुन केहि चीजहरू होइन)। र यो काममा, एक परिवर्तनीय ओडार एक महान सहयोगी बन्छ।
नयाँ बच्चाको आगमनभन्दा पहिले क्रिब एउटा आवश्यक तत्व हो, यो परिवर्तनकारी तालिकाको रूपमा छ। र एक परिवर्तनीय पालना, सामान्यतया, यसले हामीलाई दुबै फर्निचरको कम्प्याक्ट कम्प्याक्टमा आवश्यक गर्दछ, साथै भण्डारण ठाउँ पनि। यदि यो पर्याप्त थिएन भने, जब बच्चा खालिमा फिट हुँदैन, यो एक ओछ्यानमा रूपान्तरण हुनेछ यसको साथ बढ्न जारी राख्न। के तिनीहरू बच्चा कोठा प्रस्तुत गर्न उत्तम विकल्प छैनन्?
1 एक परिवर्तनीय पालना को लाभ
2 परिवर्तनीय क्रिब्स
2.1 क्रिब ग्रो (गुलाब)
2.2 डबल बेड प्लस क्रिब (रोज)
2.3 घन क्रिब (जोताजोतेप)
2.4 पालना लालित्य (तेगर युवा)
एक परिवर्तनीय पालना को लाभ
परिवर्तनीय क्रिब्सको ठूलो फाइदा यो हो कि तिनीहरू बच्चासँगै बढ्छन्, बच्चाको विभिन्न चरणहरूमा अनुकूलन गर्न रूपान्तरण गर्दै। पहिलो चरणमा यो पालना र परिवर्तन तालिकाको रूपमा काम गर्दछ। पछि, दोस्रो चरणमा, जब बच्चा ठूलो ठूलो ओछ्यानमा सुत्नको लागि पर्याप्त मात्रामा पुगेको छ भने, क्रिब ओछ्यानमा परिवर्तन हुन्छ.
लालित्य परिवर्तनीय पालना (तेगर युवा)
यद्यपि यो बोक्सीविद्या जस्तो लाग्न सक्छ, यो वास्तविक छ। यो फर्निचर बच्चाको रूपमा बढ्दै जान्छ, तपाईंलाई वर्षको लागि तिनीहरूका मुख्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक सबै चीज प्रदान गर्दछ। यद्यपि एक प्राथमिकी तिनीहरू महँगो छन् धेरै फाइदाहरू एक परिवर्तनीय पालना मा शर्त गर्न:
तिनीहरूले तपाईं प्रस्ताव एक पालना भन्दा बढी। फर्नीचरको यी कम्प्याक्ट टुक्राहरूमा सामान्यतया बदलिएको तालिका र भण्डारण ठाउँ समावेश हुन्छ।
तिनीहरू तपाईंको बच्चाको साथ हुर्कन्छन्। क्रिब एउटा ओछ्यानमा परिणत हुन्छ जुन बच्चाको विभिन्न उमेर र साना टेबुल वा डेस्कमा अतिरिक्त फर्निचरमा अनुकूल हुन्छ।
तिनीहरूले तपाईंलाई नयाँ फर्नीचर किन्न रोक्छन् त्यो केहि बर्ष पछि बच्चाको नयाँ आवश्यकताहरू अनुकूल गर्दछ।
हामी तपाईंलाई केवल एउटा विचार मात्र बेच्न चाहँदैनौं, त्यसैले हामी तपाईंलाई के विश्वास गर्छौं भनेर देखाउने निर्णय गरेका छौं उत्तम परिवर्तनीय क्रिब्स बजारबाट। यद्यपि तिनीहरू हामीलाई के प्रस्ताव गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा तिनीहरू समान छन्, तिनीहरू तिनीहरूको डिजाइनमा भिन्न हुन्छन् र तिनीहरूको आफ्नै विशेषताहरू र कार्यक्षमताहरू हुन्छन् जुन एक वा अर्को छनौटमा निर्णायक हुन सक्छ।
क्रिब ग्रो (गुलाब)
ग्रो कन्भर्टेबल क्रिब तपाईको बच्चा हुर्कनको लागि उत्तम स्थान हो। कन्भर्टेबल क्रिबको रूपान्तरणको पहिलो चरणमा यसलाईaमा रूपान्तरण गर्ने हुन्छ १×० × bed० ओछ्यान, डेस्क र शेल्फ। खोक्रोबाट ओछ्यानमा सर्नको लागि आदर्श हो, किनकि तपाईंले नाइटस्ट्यान्ड पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईं र बच्चा दुबै सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ।
परिवर्तनीय क्रिब (रोज) बढाउनुहोस् दोस्रो चरण बच्चाको ठूलो ओछ्यानमा सुत्न पर्याप्त बढेको छ जब शुरू हुन्छ। कन्भर्टेबल ग्रो क्रिबलाई त्यसपछि एकमा रूपान्तरण गरिन्छ १ 190 ०। ० ओछ्यान। डेस्क पनि परिवर्तन हुन्छ, किनकि ओछ्यानको एक टुक्रा डेस्कमा गएर यसलाई उठाउन र बच्चाको उचाइमा अनुकूलित गर्नुहोस् ताकि ऊ चित्रण गर्न, लेख्न र अझ आरामपूर्वक पढ्न सक्दछ।
डबल बेड प्लस क्रिब (रोज)
यो परिवर्तनीय पालना रोजले समान फर्निचरमा १×० × cm० सेन्टीमिटरमा मिलाउँछ। क्रिब, ड्रअर्स र ए १ 190 ० × ० सेमी पुल-आउट ओछ्यान। यो तपाईं सँगै पहिलो रातहरू सँगै दुबै एक महान रूपान्तरण पालना बन्छ, र तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई केही वर्ष पछि आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
परिवर्तनीय बीकामा प्लस क्रिब (रोज)
रोजले तपाईंलाई कन्भर्टेबल क्रिबलाई अन्य फर्नीचरसँग मिल्ने सम्भावना पनि प्रदान गर्दछ जस्तै डेस्क वा ए आफ्नो मापन कोठरी नापहरू, र Choose्गहरू छनौट गर्नुहोस् र केहि टुक्राहरू जोड्न नबिर्सनुहोस् जस्तै सल्फहरू, जसले कोठामा गतिशीलता थप्नेछ।
घन क्रिब (जोताजोतेप)
आधुनिक डिजाइनको साथ, क्युबोले तपाईंको चरणको प्रत्येक चरणमा तपाईंको बच्चाको विकासको आवश्यकताहरू लाई अनुकूल गर्दछ: टेबुलबाट टेबुलसँग बदल्दा यो विकसित हुन्छ सुरक्षात्मक कुशनको साथ कम ओछ्यान त्यसोभए तपाईं सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईं पालना तल राख्नुहुन्छ र अन्तमा डेस्कसँग जुनियर बेडमा। पाँच ड्रअर्सले सजिलो बनाउँदछ पहिले परिवर्तन राख्नुहोस् र त्यसपछि ओछ्यान उठाउनुहोस्।
परिवर्तनीय क्रिब क्यूबो (जोटाजोतेप)
यो पालना पनि फरक प्रदान गर्दछ अनुकूलन विकल्पहरू। तपाईं उदाहरणका लागि, सात शेडहरू: धातु, हस्तिहाड, पृथ्वी, आगो, गहुँ, टकसाल र नौसेनाबाट छनौट गरेर पाटीमा असबाबबद्ध रेलिंगको रंग अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। यस र color्गको छनौटको साथ तपाईं कोठामा आनन्दको स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ।
पालना लालित्य (तेगर युवा)
टेगर जुवेनिल एलिगेंस कन्भर्टेबल क्रिबमा क्रिब र अंतर्निहित परिवर्तन तालिका हुन्छ जुन तपाईले एक पटक यसलाई प्रयोग गर्न रोकेपछि, तिनीहरू एउटा कम्प्याक्ट बेड, नाइटस्ट्यान्ड र डेस्कमा रूपान्तरण हुन्छन्। खरीद अधिकतम गर्न र प्राप्त गर्नका लागि उत्तम उत्तम सुसज्जित युवा कोठा भविष्यको लागि। अघिल्लो जस्तो यो पनि एक संयुक्त डिजाइन प्रस्तुत गर्दछ जुन तपाइँ अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
परिवर्तनीय क्रिब्स लाई एक आवश्यक छ ठूलो लगानी जस्तो कि हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं। हामीले तपाईंलाई देखाइएको चार कन्भर्टेबल क्रिब्सको मूल्य € १२०० भन्दा बढी छ, यद्यपि तपाईं तिनीहरूलाई € ००० बाट पाउन सक्नुहुन्छ। एक मूल्य जसमा दुबै शाईब र परिवर्तनकारी तालिका साथै ती फर्निचरहरू समावेश छन् जसमा यी पछि परिवर्तित हुन्छन्, तर गद्दा र परिवर्तन भएका म्याट मैटहरू सँधै सामेल हुँदैनन्। त्यसकारण हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं जहिले पनि राम्रो प्रिन्ट पढ्नुहोस् र कुनै प्रश्न सोध्नुहोस् जुन तपाईं निर्णय गर्नु अघि हुन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » कन्भर्टेबल क्रिब छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको बच्चासँग बढ्छ
तपाईंको घर अफिसका लागि आधुनिक डेस्क
भोजन कोठा बत्तीहरू, आफ्नो छनौट गर्नुहोस्